La Pedriza - Mma nke nkume na Manzanares el Real | Njem zuru oke
Anyị na-aga Sierra de Guadarrama na ndị ọzọ kpọmkwem, Manzanares el Real. Obodo nke dị na ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Community nke Madrid. N'ebe ahụ, anyị ga-ahụ ebe pụrụ iche a na-akpọ La Pedriza. Ọ bụ ụdị nke buru ibu nke ejiri okwute mee, nwee ụdị dị iche iche.
N'ihi omume ndị mere na ha, ruo ọtụtụ afọ, ha enwetala nsonaazụ a. A ebe kachasị mma maka ịrịgo egwuregwu yana ịga njem ma nke ahụ nwere mma pụrụ iche na ọkwa ala. Ọ bụrụ n ’ịmaghị ya, taa anyị ga - enye gị ozi niile dị mkpa maka ya.
1 Otu esi aga La Pedriza
2 Mmalite nke La Pedriza
3 Mpaghara nke La Pedriza
4 Ọnụ kasị elu nke ebe ahụ
5 Nkpuru osisi, umu anumanu na mmiri ya
6 Ihu igwe nke La Pedriza
Otu esi aga La Pedriza
Iji ruo La Pedriza anyị nwere mpaghara mpaghara (M-608). Ọ bụ okporo ụzọ jikọtara Manzanares del Real na Soto del Real yana Guadalix de la Sierra. N'ịga n'okporo ụzọ a na aka nri na Manzanares del Real, anyị na-ahụ ụzọ gafere Collado de Quebrantaherraduras ma mechie ebe a na-akpọ Canto Cochino. E nwere ebe a na-adọba ụgbọala n’ebe ahụ, nke nwere ohere maka ihe karịrị 200 ugbo ala. Mgbe anyị rutere n'ógbè a, anyị ga-anọ n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke La Pedriza. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga ụgbọ ala, mgbe ahụ enwere naanị otu akara nke jikọtara Madrid na ebe anyị na-aga. Ọ bụ ihe ahịrị 724 nke na-aga Plaza de Castilla na Madrid.
Mmalite nke La Pedriza
na okwute granite bụ isi nke ebe dị ka nke a. Ọ bụrụ na anyị laghachi na nhazi ya ma ọ bụ mmalite ya, anyị na-ekwu maka 300 nde afọ gara aga. Ha nwere agba pinkish ma wuo ụfọdụ ndagwurugwu na mmejọ, nke nyere ha ụdị njirimara ha nwere.
Ndị gneisses ahụ megogoro karịa ma achọta ha n'akụkụ dị eluAnyị ga-ahụ granite na mpaghara ọ bụla na ụrọ dị na ndị na-edozi ahụ. Ihe ejiri mara granite na-egosipụta ebe a dum, ebe mgbawara na ya ga-enye ebe ọhụrụ ọhụrụ. Ikekwe n'ihi oge mmiri dị jụụ na ndị nwere obi iru ala, ọ gbanwere nkume ndị ahụ ruo ọhụụ nke anyị nwere taa.
Enwere ike ịsị na ha sitere na Middle Paleozoic. Ebe granite na sedimenti na-apịachi, na-ebute gneisses. Mgbe e mesịrị, na Upper Paleozoic, ihe ndị a mgbaji. Na Mesozoic anyị ekwuolarịrị gbasara usoro mbuze. Na ngwụsị nke oge a, oké osimiri ahụ na-ekpuchi akụkụ nke ala ebe a ga-etinye limestone na ájá, nke a bụ ihe a pụrụ ịhụ taa na mpaghara ndagwurugwu Lozoya. Na mgbakwunye, mgbe anyị ruru Quaternary, anyị ga-ahụ ihe ga-eme ice. Nke a ga-emezigharị ihe enyemaka nke oge a.
Mpaghara nke La Pedriza
Anyị nwere ike ịsị na mgbe anyị na-ekwu maka La Pedriza, anyị ga-ekewa ya ụzọ atọ, nke dị iche na ibe ya. Nke mbụ bụ Alcornocal, nke bu ugwu di na ugwu Manzanares el Real. Ọ bụ akụkụ mbụ, nke pekarịrị ma yabụ dịkarịsịrị ala. Akụkụ nke abụọ dị n'akụkụ ugwu nke Alcornocal.
A maara ya dị ka Pedriza Anterior. N'ebe a, ị ga - ahụ otu n'ime ihe kachasị mkpa nke aha ya, Risco del Yelmo, nke dị 1719 m. Ọ bụ mpaghara ebe anyị ga-ahụ ugwu ugwu na ọtụtụ ndagwurugwu. Akụkụ nke atọ bụ oku Akwụkwọ akụkọ Pedriza. Ọ na-esite na mmiri Dehesilla ruo Cuerda Larga, nke bụ mpaghara ugwu ọzọ. N'ebe a, ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe a na-akpọ Torres de la Pedriza. Ọ bụ otu n'ime ọnụ ọgụgụ kachasị elu na ebe niile nwere ihe karịrị mita 2000. Ọ nwere ọnụ ọnụ ugwu granite na n'ihi ihe mmiri ozuzo na mmanya dị, ha nwere ụfọdụ ụdị mbido mbụ.
Ọnụ kasị elu nke ebe ahụ
Ka anyị na-ekwu maka ya, a na-akpọ ya Nkume ma ọ bụ ọnụ ọnụ na anyị ga-ezukọ na mpaghara ahụ. El Alcornocal bụ otu n'ime ala nke ebe ahụ nwere mita 1110. Mgbe ahụ, anyị ga-ezute El Elefantillo, Peñas Cagás, Cerro del Jalón ma ọ bụ Risco El Pájaro ndị dị gburugburu 1400-1500 mita.
Ugbua gafere mita 1600, anyị ga-ezute Risco del Puente, Carro del Diablo ma ọ bụ El Acebo. N’agbata mita 1700 na 1800, anyị hapụrụ El Torro, Risco del Yelmo, Los Fantasmas ma ọ bụ Torre de los Buitres. Ekwesiri ighota na Cerro de los Hoyos na Las Torres de la Pedriza bu ebe kachasị elu nke ebe a.
Nkpuru osisi, umu anumanu na mmiri ya
Ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka ebe dị egwu dị otú a, ọ bụghị naanị na nkume ahụ ga-abụ ndị protagonists. Osimiri ma ọ bụ iyi ha na-eso ha n'ụzọ nkịtị. Ọ na-gafere site na Osimiri Manzanares ma site na iyi ndị dị ka Majadilla, Dehesilla ma ọ bụ Los Huertos. Ekwuru na mmiri dị mma karịa. Anyị na-ahụ Charca Verde, ebe ndị na-asa ahụ anaghị ala azụ iji oge anwụ na-acha anwụ anwụ.
Ahịhịa dị ka ugwu dị elu. Hazel, chestnut ma ọ bụ holm oak bụ ụfọdụ n'ime osisi ndị anyị ga-achọta. A pụghị ịhapụ ụmụ anụmanụ ya n'azụ ma gosipụta ya n'ụzọ kachasị iche. N'ime ha anyị na-eme ka mgbada ele na anụ ọhịa na ewu ọhịa. Anụ ndị na-akpụ akpụ na-agagharị na nkuku ndị a na n'etiti anụmanụ ndị na-enye anụmanụ ka anyị nwere ike ịhụ okpokoro uhie na oke bekee nke Iberia ma ọ bụ anụ ọhịa wolf. Nnụnụ na azụ ahụ achọghịkwa ịhapụ ebe a maka ibi ndụ ha.
Ihu igwe nke La Pedriza
Enwere ike ịsị na mpaghara a nwere obi ụtọ na a kọntinent Mediterranean. Nke a bụ ọnọdụ ihu igwe dị jụụ, nwee ọtụtụ ọdịiche. Ebe ọ bụ na n’otu aka, ọ nwere ọkọchị ọkọchị ma ogologo oge oyi, udu mmiri. Ọ bụ ezie na ịnọ n'ugwu, ebe ịdị elu nke otu ga-abụrịrị nke na-egosi mgbanwe ndị a.
Site na elu nke mita 800, mmiri ozuzo na-abụkarị karịa, ma e wezụga n'ihi okpomọkụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị na elu a dị gburugburu 11º na 28º n'oge ọkọchị. Ọ bụ ezie na n'oge ụfọdụ oge oyi, anyị nwere ike ikwu maka ụkpụrụ na-adịghị mma. Ebe dị elu karịa elu, ka a na-enwe mmiri ozuzo karịa. Na mgbakwunye, enweghị ike ịpụ snow n’etiti ọnwa Disemba na Eprel. Yabụ, ịmara nke a anyị maara na elu elu ahụ, oyi ga na-ajụ oyi ma na-ajụkarị oyi, na-echefughị ​​oke ifufe na mpaghara ndị ahụ dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » La Pedriza
___123___La Pedriza - Mma nke nkume na Manzanares el Real___123___
Zaghachi Andrey Golubhog
Ihe ị ga-ahụ na Paris